Budata Avira Rescue System maka Windows
Budata Avira Rescue System
Free Budata maka Windows (627.75 MB)
Budata Avira Rescue System,
Sistemụ nnapụta Avira bụ ngwanrọ mgbake sistemụ nke ga -enyere gị aka mgbe sistemụ arụmọrụ Windows gị anaghị ebido.
Mgbe ụfọdụ, Windows nwere ike ọ gaghị enwe ike mepee site na ịhapụ ọrụ ya nihi mwakpo nke ngwanrọ ọjọọ dịka nje. Ewezuga nke a, ihe ndị dị ka ngwanrọ arụnyere ọhụrụ na esemokwu ngwaike nwere ike ime ka Windows ghara ịkwalite.
Sistemụ nnapụta nke Avira na -emepụta ma ọ bụ mepụta CD ma ọ bụ DVD mgbake sistemụ ị nwere ike iji nọnọdụ ndị a mgbe sistemụ arụmọrụ Windows anaghị ebido. Niji usoro mgbasa ozi a, ị nwere ike rụọ ọrụ dịka mgbake data, ma rụọkwa mgbake sistemụ na -enweghị nhazi. Sistemụ nnapụta Avira na -enweta faịlụ echekwara na kọmputa gị wee nye gị ohere ịkwado ya. Na mgbakwunye, ọ na -ewepụ nje ndị na -egbochi sistemụ gị ịmalite site na nyocha na ihicha nje ma na -egbochi mkpa nhazi.
Iji jiri sistemụ nnapụta Avira, ịkwesịrị ịgba ihe onyonyo diski ISO ebudatara na CD ma ọ bụ DVD site na iji mmemme ọkụ CD/DVD gị.
Sistemụ nnapụta Avira bụ ngwa enyemaka mbụ na -akwụghị ụgwọ na -abịa napụta gị nọnọdụ ọnọdụ mberede ma na -eburu mma Avira.
Avira Rescue System Ụdịdị
Nha faịlụ: 627.75 MB